Guddigii doorashada Madaxweynaha & Kuxigeenka Galmudug oo labo garab u kala jabay (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 22, 2020 2:26 b 0
Guddiga Baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka maamulka Galmudug ayaa khilaaf soo kala dhexgalay dartiis u kala jabay labo garab oo kala aragti duwan, xilli muddo asbuuc ah ay ka dhimmantahay doorashada madaxweynaha iyo kuxigeenka maamulka Galmudug.
Khilaafka guddigaan doorashada ayaa salka ku hayaa shuruucdooda shaqo iyo hannaanka is doorasho ee dhaxdooda ah, taasoo ay ku dooran lahaayeen maanta guddoomiye iyo kuxigeen guddoonsha fadhiyadooda guddi ahaaneed.
Xubno ka mid ah guddigaasi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Malmudug ayaa sheegay labo garab in ay u kala jabeen guddi ahaan kadib markii dawladda dhexe ee federaalku ay faragelin lixaadleh ku samaysay hawlaha guddiga, lagana horistaagay habkii ay waajibaadkooda shaqo u gudan lahaayeen.
Xildhibaan Muxyadiin Shiikh Cabdullaahi oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo kuxigeenka Galmudug ayaa sheegay masuuliyiin dawladda dhexe ah in ay guddigooda ugu hanjabeen in ay waayi doonaan xasaanaddooda xildhibaannimo haddii aysan guddoomiyaha iyo kuxigeenka guddiga u dooran xubno dawladda wadato oo loogu farfiiqay.
Dhinaca kale Xildhibaan Muxyadiin, waxaa uu sheegay in guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal uu soo farageliyey shaqada guddiga, uuna sheegay guddigooda labo ruux oo ay tahay in ay guddoomiye iyo kuxigeen u doortaan, tallaabadaasna markii ay diideen qayb ahaan guddigu uu isagu magacaabay guddoomiye iyo kuxigeenka hoggaamiya guddiga doorashada.
Guddigu waxay sheegeen in tallaabada uu qaaday guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka labaad ee Galmudug ay tahay mid sharci darro, aysanna ka mid ahayn awoodaha sharci u fasaxayo in uu magacaabo guddoonka guddiga doorashada.
Khilaafka guddiga doorasha madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka Galmudug, ayaa imaanaysay iyadoo loo madlanaan 30 bishaan Jannaayo ee 2020, in ay dhacdo doorashada madaxtooyadu, laguna doorto madaxweynaha Galmudug ee afarta sano ee soo socota iyo kuxigeenkiisa.